Andavamamba : Norobain’ny jiolahy ny farmasia “Tsara” -
AccueilSongandinaAndavamamba : Norobain’ny jiolahy ny farmasia “Tsara”
Nisehoana fanafihana mitam-piadiana andro mazava indray teny amin’ny toeram-pivarotam-panafody iray eny Andavamamba Anatihazo, omaly tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro. Jiolahy miisa dimy tsy nisaron-tava ka ny iray nitondra “pistolet automatique” no nanafika ny farmasia antsoina hoe Tsara, ka lasa tamin’izany ny vola rehetra azo nandritra ny andro, izay tsy voafaritra mazava ny teti-bidiny. Marihina fa andro mbola naha-betsaka ny mpividy fanafody sy olona teny an-toerana tamin’io fotoana io, ka maro tamin’ireo mponina no nahatsikaritra ny zava-nitranga, saingy tsy nitampify noho ny tahotra. Taorian’izay, nandrahona ilay mpitazom-bola tao amin’ny farmasia ireo jiolahy mba hanomezana ny vola rehetra tao anaty fitoeram-bola. Nandritra izay anefa, nisy ny fandavana nataon’ny mpitam-bola ka avy hatrany dia nodarohan’ireo olon-dratsy tamin’ny alalan’ny totohondry, ka naratra mafy noho ny fahavoazany. Mpanjifa iray tao amin’ity toerana fivarotana fanafody ity koa no voaroba finday sy vola nandritra izany fanafihana izany. Vokany, tsy nisy aloha ny aina nafoy fa nentina faingana eny amin’ny hopitaly Hjra ilay mpitam-bola naratra mafy.
Araka ny filazan’ireo sendra nandalo tamin’io fotoana io, ka nahatsikaritra ny ampahany tamin’ny fizotran’io fanafihana io dia tsy nisy nahafantarana azy ireo jiolahy niara-nanatontosa ny asa ratsiny. Rehefa nipoaka ny basy vao nikoropaka ireo olona teny amin’ny manodidina, izay efa lasa nandositra niaraka tamin’ny vata fitoeram- tao amin’ilay farmasia ireo jiolahy. Fotoana fohy dia fohy no nanatanterahan’ireto olon-dratsy ireto an’io teti-dratsiny io raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso ny zava-nitranga ihany. Dify ireo jiolahy ireo vao nampandre ny polisy misahana ny ady heloka bevava ny manodidina, saingy efa tsy tratra ireo olon-dratsy. Efa nanomboka ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana hikarohana ireo tsy mataho-tody ankehitriny.
Saika efa mitsinjo ny ampitso avokoa ireo mpanao politika malagasy amin’ izao fotoana izao, ka na dia ireo laharam-pahamehana amin’ny fiainam-pirenena aza dia zary lalovan’ izy ireo fotsiny ihany. Tsapa izany nandritra ny fihaonan’ireo solombavambahoaka ...Tohiny